HomeWarqad Hordhac ah
RayHaber xayeysiis - Xayeysiis
Bursa, halka ay taalo in mid ka mid ah magaalooyinka ugu muhiimsan ee xuduudda la leh Turkey iyo sidoo kale taariikhda. Xaqiiq ahaan, ahaanshaha mid ka mid ah magaalooyinka waa weyn waxay sidoo kale ka dhigeysaa mid ka baxsan marka loo eego magaalooyinka gudaha. Sidaas darteed, Bursa ayaa leh [More ...]
Iyaga oo u soo bandhigaya macaamiishooda xargaha waxqabadka sare iyo xarkaha fiilooyinka ee hal-ku-dhigga '' Energizes Life '', Nexans waxay sii wadaa inay abuurto farqiga qaybta iyada oo leh "Drums Drums" oo iskuxiran. Hal-abuur leh, laga bilaabo fiilada illaa internetka ee waxyaabaha [More ...]
Ku sii wadista daraasaddeeda ballaadhan ee duulista caalamiga ah ilaa maalintii ugu horraysay ee ay gashay qaybta, shirkaddeenna, Arındırim Lojistik, waxay ku guuleysatay safka Ruushka iyo sidoo kale dhammaan waddamada Yurub iyo Aasiya. [More ...]
Naqshado Naqshado Gaar Ah Oo Loogu Talo Galay Maalinta Jacaylka
Caan ka mid ah goynta dheeman ayaa sidoo kale ah badeecadaha ugu isticmaalka badan ee waagaas. Noocyada qoorta, hilqado dhejisyo ama dugaagado wareegsan oo la gooyey sanadihii hore ama loo yaqaan dhibic gooyn. [More ...]
Khibrad 23 sano ah Hawlaha Gaadiidka Jordan
Xiriirradayada ganacsi, ee sii wata qaab dhismeedka xiriirka laba geesoodka ah ee waddammo badan oo leh gaadiidka dhulka iyo badda, ayaa sidoo kale si joogto ah loogu ilaaliyaa Urdun. Waxay ku taalaa gobolka sababta oo ah waxay ka mid tahay wadamada Bariga Dhexe [More ...]
Haddii aad qorsheynaysid inaad aado Akyaka; Dabcan, maxaa la sameeyaa Akyaka? Waxa kale oo aad la yaabaysaa jawaabta su'aasha. Waxaan kaloo uga jawaabnay aragtida iyo waxa aan sameyn karno illaa inta aan arki karno. Xitaa maanta [More ...]
Antalya, oo ah mid ka mid ah meelaha ugu safarka badan ee loo dalxiis tago, ee kuwa fasaxa fasax u ah ayan ka tanaasulin, waxay bixiyaan xulashooyin badan oo loogu talagalay kuwa jecel safarka. Iyada oo xeebaha caanka ah ee adduunka, hoteellada qaaliga ah, meelaha jannada laga fuulo iyo boqolaal magaalo oo qadiim ah, oo ah garaaca dalxiiska [More ...]
Iyada oo ay ugu wacan tahay goob ahaan juqraafi ahaan, Ruush, oo si gaar ah ugu tiirsan sahayda cunnada, ayaa siisa qaybo badan oo ka mid ah cuntada aasaasiga ah sida khudradda iyo khudradda cusub ee laga keenay waddankeenna. Ku dhawaad ​​sanadka oo dhan [More ...]